သော့ကွင်းဆက်အမျိုးအစားများကဘာတွေလဲ။ အဓိကသော့ချက်ပစ္စည်းမိတ်ဆက် - သတင်းများ - ZHAOQING CITY YUYA METAL PLASTIC PRODUCTS CO ။ , LTD ။
နေအိမ် > စက်မှုသတင်း > သော့ကွင်းဆက်အမျိုးအစားများကဘာတွေလဲ။ သော့ချက်ပစ္စည်းနိဒါန်း
အဆိုပါဇနီးမောင်နှံသော့ချိတ်သည်အသစ်စက်စက်တီထွင်ထားသောသွပ်သတ္တုစပ်လက်ဝတ်ရတနာ၊ ကုန်သည်များမှကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်မြှင့်တင်သောလက်မှုလက်ရာပစ္စည်းနှင့်လက်ဆောင်အသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျောဘက်မှာတော့လေဆာ LOGO, ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်ခလုတ်ခုံတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကုန်ပစ္စည်းအသုံးပြုမှု - ကော်ပိုရိတ်အမှတ်တံဆိပ်လူသိရှင်ကြား၊ ကုန်ပစ္စည်းအသစ်မြှင့်တင်ရေး၊ ခရီးသွားဆွဲဆောင်မှုများ၊ အမှတ်တရပစ္စည်းများ၊ ကျောင်းအမှတ်တရပစ္စည်းများ၊
ကားသော့ချိတ်သည်အသစ်တီထွင်ထားသောဇင့်အလွိုင်းအော်တိုဆောင်းပါးဖြစ်သည်။ မျက်နှာပြင်ကိုရေနံယိုဖိတ်ခြင်း (သို့) ရှားပါးသောသတ္တုဖြင့်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်သံချေးတက်ခြင်းကိုကာကွယ်သည်။ ၎င်းသည်ကား 4S ဆိုင်အရောင်းမြှင့်တင်ရေး၏ပိုင်ရှင်အတွက်လက်ရာမြောက်သောလက်ဆောင်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ပိုင်ရှင်အတွက်မဖြစ်မနေလိုအပ်သောကားအတွင်းပစ္စည်းဖြစ်သည်။ Pendant, ကိုယ်ပိုင်ဖက်ရှင်ပစ္စည်းများ။
ကုန်ပစ္စည်းအသုံးပြုမှု - အမှတ်တံဆိပ်မြှင့်တင်ရေးအထိမ်းအမှတ်ပစ္စည်းများ၊ အမှတ်တံဆိပ်မြှင့်တင်ရေး၊ ကုန်ပစ္စည်းအသစ်မြှင့်တင်ရေး၊ အမှတ်တရလက်ဆောင်များနှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများ။
Theကြည်လင် and cast steel materials plus the production process are exquisite and durable, and are very popular among young friends. In the beginning, ROC may have just considered the "cold surface and cool shape" of hardware. From the design of these key chains, it has changed from the past. The exquisite appearance is very attractive to the little girls. And the advent of summer is alsoagood decoration.
The solar flash keychain is the latest solar application product developed and produced. It uses the power supply principle of the low-light amorphous silicon solar cell to make the high-quality LCD flash. It isabrand-produced craftwork andanovel gift. Symphony of liquidကြည်လင် display, full of fun and sense of technology between flashes!
ကုမ္ပဏီအမှတ်တံဆိပ်၊ ကုန်ပစ္စည်းအသစ်မြှင့်တင်ရေး၊ ခရီးသွားဆွဲဆောင်မှုများ၊ အမှတ်တရပစ္စည်းများ၊ ကျောင်းအမှတ်တရပစ္စည်းများ။ ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ အင်တာနက်၊ အာမခံ၊ စာတိုက်နှင့်ဆက်သွယ်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ မီးရထား၊ လေကြောင်း၊ လေကြောင်း၊ ရှေ့ဖက်တစ်ဖက်မှာတောက်ပနေပြီးနောက်ဘက်မှာလေဆာစာရွက်ပါရှိပါတယ်။
အလုပ်လုပ်သော electrostatic keychain သည်လူ့ခန္ဓာကိုယ်၊ ကား၊ ကွန်ပျူတာ၊ အိမ်အသုံးအဆောင်များ၏နေ့စဉ်ဘ ၀ ကိုဖယ်ရှားရန်ငြိမ်သောလျှပ်စစ်ရှိသည့်သော့ကွင်းဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသောအခါတည်ငြိမ်သောအရာဝတ္ထုများကိုထိပါးရန်ငြိမ်သောအရာဝတ္ထုများကိုထိရန် keychain ကိုကိုင်ထားပါ။
Wide: ၎င်းသည်လူ့ခန္ဓာကိုယ်၊ ကား၊ ကွန်ပြူတာ၊ သတ္တုပစ္စည်းများစသည်တို့၏နေ့စဉ်ဘ ၀ (စက်မှုတည်ငြိမ်သောလျှပ်စစ်မီးမှအပ) ၏ငြိမ်သက်သောလျှပ်စစ်ဓာတ်အားအားလုံးကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်သည်။
အစာရှောင်ခြင်း - တည်ငြိမ်သောလျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖယ်ရှားပေးရမည့်အချိန်သည် ၀.၂ စက္ကန့်မှ ၃ စက္ကန့်ဖြစ်သည်။
အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး - အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမဖြစ်စေပဲလုံးဝဘေးကင်း။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောထုတ်ကုန်များ။
PVC ပျော့ပျောင်းသောပလပ်စတစ်သော့ချိတ်ကို epoxy keychain၊ ပျော့ပျောင်းသောပလပ်စတစ်သော့ချိတ်၊ ပလပ်စတစ်သော့ချိတ်၊ ပျော့ပျောင်းသော PVC ထုတ်ကုန်များ (micro-inject) ကိုတင်သွင်းသောကုန်ကြမ်းများနှင့်ထူးခြားသောသိပ္ပံနည်းကျဖော်မြူလာများဖြင့်ထုတ်လုပ်သည်။ ၎င်းတို့အားလုံးကိုအဆိပ်မရှိသော PVC ပျော့ပျောင်းသောရော်ဘာပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးကမ္ဘာပေါ်တွင်ရေပန်းစားသည်။ ၎င်းတို့ကိုတင်သွင်းသောကုန်ကြမ်းများနှင့်ထူးခြားသောသိပ္ပံနည်းကျဖော်မြူလာများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးသည်ဥရောပကစားစရာများမှတဆင့်လုံခြုံသည်။ EN71-1, EN71-2, EN71-3 စံချိန်စံညွှန်းများ။ (ထုတ်ကုန်များသည်ဥရောပနှင့်အမေရိကန်စျေးကွက်များတွင်ကောင်းစွာရောင်းသည်)
ဆိုလိုသည်မှာ၊ plexiglass သည်သွင်းကုန်ပစ္စည်းများနှင့်အိမ်သုံးပစ္စည်းများခွဲခြားထားသောအရာသည်အချည်းနှီးဖြစ်ပြီးအစိုင်အခဲဖြစ်ကာပွင့်လင်းမြင်သာပြီးအရောင်စက္ကူကိုအလယ်တွင်ထားနိုင်သည်။ acrylic ၏မာကျောသော့ချက်လက်စွပ်၏ wear ၏ဒီဂရီဆုံးဖြတ်သည်။ ရိုးရာကြွေထည်ပစ္စည်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကမတူနိုင်လောက်အောင်မြင့်မားသောတောက်ပမှုအပြင် acrylic သည်အောက်ပါအားသာချက်များရှိသည်။ သင်သန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းများကိုသုတ်ရန်သွားတိုက်ဆေးထဲသို့နူးညံ့သောအမြှုပ်များကိုအသုံးပြုသည်မှန်သမျှ၊ ပျော့ပျောင်းသော texture, ဆောင်းရာသီအအေးခါးသီး၏အဓိပ္ပာယ်မရှိ; ကွဲပြားခြားနားသောအရသာ၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးလိုက်စားတွေ့ဆုံရန်ရောင်စုံရောင်စုံ။ အင်တုံများ၊ ရေချိုးကန်များနှင့်အိမ်သာများပြုလုပ်ရန် acrylic ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်စတိုင်ကျကျ၊ တာရှည်ခံရုံသာမကပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်လည်းသက်ဆိုင်သည်။ ၎င်း၏ဓါတ်ရောင်ခြည်သည်လူ့ကိုယ်ခန္ဓာ၏အရိုးများနှင့်တူညီသည်။
သွပ်သတ္တုစပ် is also one of the relatively malleable metals. Generally, the surface is treated by dripping paint or electroplating to make the product more beautiful. Surface treatment processes are: polishing, paint (baking paint), soft enamel, printing, oil spray, sand blast, electroplating.
၎င်းကိုသားရေဖြင့်ချုပ်ထားပြီးသားရေစစ်မှန်။ သားရေ၊ အတု၊ သားရေ၊ PU နှင့်အလယ်တွင်ထည့်ထားသည့်အလင်းသေးငယ်သည့်သော့ကွင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုညအချိန်တွင်သို့မဟုတ်အမှောင်ထုတွင်အလင်းရောင်အတွက်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။
ဆေးထိုးသည့်မှိုကိုဖွင့်ပါ၊ ၎င်းကို ABS ပစ္စည်းဖြင့်ထိုးပါ၊ ထို့နောက်ဆေးသုတ်ပါ။ မှိုဖွင့်ပွဲ၏ကုန်ကျစရိတ်မှာမြင့်မားပြီး၊ အရေအတွက်သည်များသောအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ အရည်အသွေး PVC ထက်အများကြီးပိုကောင်းသည်။
Generally, artificialကြည်လင် is used as the material, which can be made into various shapes ofကြည်လင် key chains. The cost generally ranges from one to dozens of yuan. Crystal has becomeafavorite of fashionistas. There isasong saying: "My love and you, likeကြည်လင်, have no burden, secrets, clean and transparent. The love I give you is beautifulကြည်လင်, and the unique light shines in my heart." Crystal Cheng A symbol of purity.
All kinds of သစ်သား are carved into various patterns, and some will also be engraved with the words of blessing. The types of materials are more common: roseသစ်သား, date သစ်သား, ebony သစ်သား, etc. Among them, jujube is believed to have an evil-evil effect in Taoism, so it is used more. (Although peach သစ်သား is also evil, but the သစ်သား is relatively soft, so it is rarely used asakeychain.)